Faalo:Muqdisho Qarax uma dhutinayso!! - Ceelhuur Online
Home > Qalinka Qoraaga > Faalo:Muqdisho Qarax uma dhutinayso!!
Faalo:Muqdisho Qarax uma dhutinayso!!
August 28, 2017 August 28, 2017 Cali Yare329
Kadib Doorashadii Madaxwayne Farmaajo iyo Aasaaskii Ciidanka Xasilinta Caasimada amniga Muqdisho ayaa uu muuqda mid soo yara hagaagaya waxaa yaraaday weeraradii loo adeegsanayay Gawaarida walxaha Qarxa laga buuxiyo iyo dadka Ismiidaaminaya ee lagu weerari jiray Xarumaha Dowladda.Hoteelada iyo goobaha Shacabku ku badan yihiin.
Hadana Majiro amni buuxa oo waxaa dhaca Qaraxyo gaysta dhimasho bulsho iyo burbur hantiyadeed Muqdisho bishiii ugu yaraan labo mar ayaa lamaqlaa daryanka Qaraxyada haba kala yaraadaan Qasaarahooduye waana mid ka kamid noqday noloshad caadi ah.
Su’asha is waydiinta mudan waxay tahay Caqabad intee la eg ayuu Qaraxu ku hayaa hormarka Muqdisho?
Hormarka Baladka iyo Bulshada Muqdisho maaha mid u hakanaya Qaraxyo gilgila ee baa-biya Dad iyo hanti waxaad arkaysa waqtiga Qaraxu dhacay in Ciidanka Amnigu gaarayaan goobta wax ka dhaceen waxayna xiraayaan Wadooyinka soo gala aaga Qaraxu ka dhacay Gawaarida gurmadka dad-waynaha ayaa iyaguna imaanaya oo qaadaya qasaaraha dhimasho iyo dhawac ee Bulshada.
Mudo yar kadib waxaa goobta soo gaaraya Kooxaha Nadaafada ee Gobolka Banaadir iyo bulsho is xilqaantay oo ujeedkoodu yahay nadiifinta Meeesha Qaraxu ka dhacay waxay qabanayaan howl boogadin mudan, Waxaadna arkaysaa goobtii wax ka dhaceen oo sidii hore ka nadiifsan
Ma arkaysid dhiig iyo Burburka dhismaaysha Qaraxu saameeyay iskaba daa burburka Gaarigii qarxee. korontada Qaraxu saameeyay ee goobtaas ayaa daqiiqado kadib la dayactirayaa irdaha Ganacsiga ayaana markii caadi kusoo labanaya asbuuc wax lamida waxaa dhib u dhis lagu samaynayaa dhismayaaashii qaraxu burburshay waxaadna arkaysaa dhisme kii hore ka qurxoon oo qaraxa ayaa ka qayb qaata bilicda Muqdisho.
Isku socodka Gaadiidka dad-waynaha iyo is dhaxgalka Bulshada ayaysan waxba iska badalayn waxaadna mooda meel waligeed amni ahayd marka aad dadka muqdisho joogay 10kii sano ee qaraxyadu ruxayeen la sheekaysato waxay kuu sheegayaan in ay caadi aktooda ka noqotay qarax dhaca iyo qof la dilaa mar hadii aysan Gudaha magaalada ka dhacayn weeraro iska hor imaad ah.
Qorbajoogtii dalka uga cararay dagaalada ayaa dhankoooda fahmay Nolosha dariska la ah Qaraxda waxayna dib ugu soo laabanayaan dalka ayagoo samaynaya maal gashi xowli ah oo dhan walba leh
Waxaana arintaan u sabab ah
1-Dadka Soomaaliyeed oo 100% Muslim ah waa dad aaminsan Nolosha iyo geerida ogna in ruux an tiisu galin uusan dhimanayn dadka inta hartayna looga baahan yahay alle ka cabsi iyo shaqo aduunyo.
2-laqabsiga Dowlad la’aanta.Mowjadaha Qaraxyada iyo didlalka dadka haldoorka ah waa arintakale ee Nolosha bulshada muqdisho caadiga ka dhigtay.
Muqdisho hada waxaa ka dhaca Qaraxyo gaysta Qasaare Nafeed oo aan badnayn waxaana u sabab ah howlaha Amniga lagu xaqiijinayo oo kor loo qaaday Ciidanka Xasilinta ayaana ka hortagay dhowr Qarax oo lala maaganaa goobo muhiim ah waxaa udanbeeyay kii 27kii bishaan ka dhacay Wadada Maka Al-mularama mana gaysan Qasaare dhimasho marka laga reebo 4ruux oo dhawacantay Ciidanka Amniga ayaa helay xogta Qaraxa waxayna xireen wadada ayagoo joojiyay isku socodka dadka iyo gadiidka sida Saraakiisha amigu Xaqiijiyeen.
W/Q Cali-Yare Adam
Aqalka Sare oo dhankooda baaraya Xasuuqii Bariire
Dowladda Soomaaliya oo Itoobiya u gacan gelisay Sarkaalkii ONLF
Qaar kamid ah Qodobada Shirka Kismaayo oo laysku mari la yahay!
October 11, 2017 Cali Yare
Maxaa looga hadlay kulankii Guuleed iyo Gaas? (Warbixin+Sawirro)
XOG:Wadahadalkii DFS & Roobow oo meel xasaasi ah gaaray
August 19, 2017 Cali Yare